Mahafantatra ny zavatra rehetra Ilay Andriamanitsika
"Jehovah ô, efa nandinika ahy Ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinikao ny toetrako, na mandeha aho, na mandry; ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa, indro, tsy misy teny tsy fantatrao eo amin’ny lelako, Jehovah ô."Salamo 139:1-4
Sarotra ho an’ny fisainan’ny olombelona ny mahatakatra fa Andriamanitra dia mahafantatra ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavin’ny tsirairay. Mahafanina izany. Fa misy zava-baovao hafa izay mahagaga antsika ihany koa; ohatra, izay hitan’ny manam-pahaizana mikasika ny hamaron’ny singa mifampidipiditra sy miasa ao amin’ny sehatry ny bitika indrindra: tena mahavariana tokoa ny antsipiriany rehetra! Andriamanitra ihany koa no mamolavola sy mifehy ny fifanakalozana rehetra mampisy ny aina, ao amin’ny zava-manana aina.
Ny vao mainka mahatalanjona dia izao… Fantatr’Andriamanitra izay eritreretiko, izay eritreretin’ny olombelona tsirairay. Ary fantany koa ny fiandohan’ny eritreritro sy ny fiafarany, ny “fampisarahana ny aina sy ny fanahy…, ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo” (Hebreo 4:12). Eny, Ilay Andriamanitra lehibe any an-danitra, Izay mibaiko ny kintana, dia mahafantatra kokoa noho izaho izay mitranga ao an’eritreritro, eritreritr’izay zava-manana aina tsy misy dikany toa ahy!
Dia fantatro fa tsy misy na inona na inona azoko afenina an’Andriamanitra. Mahatakatra ihany koa aho hoe afaka miaiky eo anatrehany –tsy amin-tahotra, satria efa fantany rahateo– ireo eritreritro rehetra tsy mifanaraka amin’ny eritreriny.
Io Andriamanitra io dia Raiko ao amin’i Jesosy; tia ahy Izy, ary ny mba hahasoa ahy no anton’ny amantarany izay rehetra mahakasika ahy. Ny tanjony dia ny hanadio ahy sy ny hitondra ahy eo amin’ilay lalana antsoina hoe “lalana mandrakizay” (Salamo 139:24).